केपी ओली सफल नेता मात्रै होइन एसियाकै राजनीतिक ब्राण्ड हुन् : टेकराज आचार्य | दर्पण दैनिक
केपी ओली सफल नेता मात्रै होइन एसियाकै राजनीतिक ब्राण्ड हुन् : टेकराज आचार्य
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुन:केपि शर्मा ओलिको उदय हुनेछ
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर ७ गते ०५:०२
नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले राजनीतिक माहोल तातिएको छ । एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य टेकराज आचार्यसंग दर्पण दैनिक सुर्खेतका सहकर्मी खगेन्द्र हमालले गरेको कुराकानीः
एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुन गइरहेको छ । तपाईंको विचारमा यो महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व चुनियोस भन्ने छ ?
चितवनमा हुन गइरहेको एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन बाट पार्टीले एउटा राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने छ । जसले पार्टी संगठनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने‚ संरचना तयार गर्ने पार्टी संगठनका कार्यको समन्वय र निर्देशन गर्ने, सामूहिक भावना अनुसार पार्टीका कार्यहरु गर्ने गराउने‚ पार्टीको कुशल प्रतिनिधित्व गर्ने‚ मातहतका अनुयायीलाई पथ प्रदर्शकको कार्य गर्ने‚ पार्टी संगठनको कार्यप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गर्ने‚ शक्ति र अधिकारको कुशल प्रयोग गर्ने‚ दुरुपयोग नगर्ने‚ समयको व्यवस्थापन गर्ने‚ सही समयमा सही निर्णय गर्ने‚ संगठनको समग्र पक्षको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्न सक्ने एउटा सक्षम जुझारु नेतृत्व चयन गरोस । जुन नेतृत्वले पार्टी र सिङ्गो देशलाई हाक्न सकोस । त्यस्तो खालको नेतृत्व चयन होस भन्ने आम एमालेका शुभचिन्तक नेता कार्यकर्ताहरुको चाहना छ । महाधिवेशनले यस्तो नेतृत्वको चयन गर्नेछ ।
धेरैजसो नेता कार्यकर्ताको चाहाना अनुसार केपी शर्मा ओली नै पार्टी नेतृत्वमा पुन आउनुपर्छ भन्ने छ, अर्कोतर्फ उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् नि ?
पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हरेक नेपाली जनता र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुको मनमा बस्न सफल नेता हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तकले केपी शर्मा ओलीलाई पुनः पार्टीको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । महाधिवेशनबाट सर्वसहमत बिजयी गराउनु पर्दछ, भन्नु चासो राख्नु स्वभाविक नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु, स्वस्थ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नु यो एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । पार्टीमा यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । कमरेड भीम रावल जी एक कार्यकाल उपाध्यक्ष पदमा बसेर पार्टीमा एउटा जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको ब्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले उम्मेदवारी दिनु स्वभाविक नै हो अन्यथा मान्नु पर्ने आवस्यक छैन् । नेतृत्व चयन पार्टीको सहमति अनुसार हुन्छ । यदि सहमति अनुसार नेतृत्व चयन हुन सकेन भने पार्टीको विद्यान अनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छ । यसमा क्षमतावान नेताहरु जो कोहि पनि नेतृत्व तहमा जानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुनेछ । पार्टी भित्र आन्तरिक जिम्मेवारी व्यवस्थापन सहित महाधिवेशनले एउटा सकारात्मक नेतृत्व चयन गर्ने छ ।
तपाईंको बिचारमा केपि शर्मा ओली कति सफल र कति असफल नेता हुन ?
केपी शर्मा ओली एउटा नेपाली राजनीतिमा सफल नेता हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा नेपालमा ऎतिहासिक विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । नेपाली जनतालाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर राष्ट्रियताको सवालमा हरेक कठिनाइ र चुनौतीका सामु डटेर सामना गर्न सक्ने एउटा सफल नेताको रुपमा स्थापित नाम हो केपी शर्मा ओली । चाहे त्यो नाकाबन्दीको बेला होस्, चाहे त्यो बिकास निर्माणका बारेमा होस् केपी ओली जस्तो दुरदर्शी नेता आजको नेपाली राजनीतिक परिवेशमा अरु कोहि पनि छैन् । यो मैले मात्रै स्वीकार गरेको कुरा हैन नेपाली जनता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरुले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । केपी ओली सफल नेता मात्रै होइन एसियाकै राजनीतिक ब्राण्ड हुन् ।
नेता हुनका लागि जनतालाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोऱ्याउने कस्तो दृष्टिकोण चाहिन्छ ? त्यस्तो दृष्टिकोण भएको नेताको विकास यो महाधिवेशनले तय गर्छ त ?
नेता हुनुको अर्थ राज्य सत्तामा पुगेर राजगर्नु मात्र नभएर जनताको जनजीवन सहज बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नु हो । नेता त जो पनि हुन सक्छ, नेता हुनलाई पद नै चाहिन्छ भन्ने छैन, तर यदि ऊ नेता हो र पदमा पनि छ भने ऊ नेतृत्वमा रहेको नेता हो, चाहे ‘इलेक्टेट’ होस् या ‘सेलेक्टेट’ । नेता भनेको यस्तो मानिस हो जसले दूरदृष्टि राख्न सक्छ, परसम्म देख्न सक्छ, जनतालाई समान व्यवहार गर्न सक्छ । भोट जसको लिए पनि निर्वाचित भएर पदमा पुगिसकेपछि उसले जनता र सिङ्गो राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ नेतृत्वमा पुगेकाहरूको अधिकांश समय आफूइतरलाई गाली गरेर बित्ने गरेको छ । जुन नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण होइन ।
नेतृत्व महत्वाकाङ्क्षाबाट आउनुहुँदैन भनिन्छ, तर हाम्रो समस्या के हो भने नेतृत्वमा आउनेहरू आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाका कारण आएका छन् । नेता हुनका लागि जनतालाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोऱ्याउने दृष्टिकोण चाहिन्छ । जनताका अगाडि शान लगाएर हिँड्ने नभई विनम्रताका साथ प्रस्तुत हुने क्षमता आवश्यक हुन्छ । अरूलाई राम्रो देख्नका लागि आफू मनभित्रैबाट राम्रो बन्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन आफू सकारात्मक सोचबाट निर्देशित हुनुपर्छ।एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले यि सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व चयन गर्नेछ।
यो दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीको पुन पार्टी नेतृत्वमा उदय हुन्छ कि नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ तपाईंको विचारमा आफ्नो के लाग्छ ?
बर्तमान नेपाली राजनीतिक दलहरुको चरीत्रलाई नियाल्दा र पार्टीमा एमाले प्रतिको जनलहर र आकर्षणलाई मुल्यांकन गर्दा केपी शर्मा ओलीको उदय निश्चित छ । आम नेता कार्यकर्ताको चाहाना पनि हो । एकपटक फेरि ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई मजबुत बनाएर चुनावमा लैजाने र चुनावबाट दुई तिहाई मत ल्याएर आर्थिक समृद्धि सहितको विकास उन्मुख समाजबादको यात्रामा जाने । यतिबेला देशभित्र र देश बाहिर बाट राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय विकास बिरोधि तत्वहरु सलबलाई रहेका बेलामा ओलिक नेतृत्वमा एमाले मजबुत पार्टी बन्ने र निर्वाचनमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याएर विकास बिरोधि तत्वहरुको मुखमा मलमपट्टी लाउने काम ओलीले नै गर्न सक्ने भएकोले गर्दा पनि महाधिवेशन बाट एमालेको अध्यक्षमा केपि शर्मा ओलिको नेतृत्व नेपाली जनताको लागि आम नेता कार्यकर्ताका लागि देशको विकासको लागि र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि पनि एमालेको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अति आवस्यक छ।